Mpempe akwụkwọ na-ehicha ọkụ akpọnwụ akpọnwụ, Ngwa diamond, igwe diamond - Bontai
China emeputa ozugbo diamond egweri ngwaọrụ maka ala
Ngwa egweri diamond
ỤZỌ Ngwa igwe nwere ike ijikọ
2021 ọhụrụ imewe 3 ″ akọrọ ojiji diamond pol...
10 ″ TGP Cup Diamond egweri Wheel
7 inch okpukpu abụọ ahịrị diamond egweri iko wiil f...
4 ″ Snail-mkpọchi Diamond Edge-egweri Wheel...
Ala diamond Concrete Floor Dry Use Resin Polishing...
3 ″ resin diamond polishing mpe mpe akwa mmiri Polish...
4 ″ Resin Diamond Polishing Pads maka Klind…
Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd e hiwere na 2010, na-enwe ndị emeputa nke pụrụ iche na-ere, na-emepe emepe na n'ichepụta ụdị nile nke diamond ngwaọrụ. Anyị nwere ngwaọrụ dị iche iche na-egweri diamond na polishing maka sistemụ polish ala, gụnyere akpụkpọ ụkwụ na-egweri diamond, wiil iko diamond, diski egweri diamond na ngwaọrụ PCD. Ka ọdabara na-egweri nke iche iche nke ihe, terrazzo , nkume ala na ndị ọzọ na-ewu ala.
Ntụnyere nke ihicha marble na ịcha ihicha mabul
Ichicha mabul na polishing bụ usoro ikpeazụ maka usoro gara aga nke ọgwụgwọ kristal na-elekọta nkume ma ọ bụ nhazi efere ọkụ nkume. Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa na nlekọta nkume taa, n'adịghị ka ụlọ ọrụ ihicha ụlọ ọrụ omenala na-asachapụ mabul ihicha na ịwasị. T...
Nkeji 7 inch Arrow Akụkụ Diamond egweri iko Wheel
Nke a 7 inch na-egweri iko wheel atụmatụ 6 angled, akụ yiri akụkụ emebere maka egweri ihe na terrazzo ala, Ị nwekwara ike iji a egweri iko wheel grinder mgbakwunye maka egweri ma ọ bụ prepping ihe, ma ọ bụ wepụ gluu, adhesives, thinset, grout bed, ma ọ bụ. ...
Otu esi ewepu epoxy, gluu, mkpuchi si n'ala kọmpat
Epoxies na ihe mkpuchi ihe ndị ọzọ dị ka ya nwere ike ịbụ ụzọ mara mma ma dịgidere iji chebe ihe gị mana iwepụ ngwaahịa ndị a nwere ike isi ike. Ebe a na-akwado gị ụzọ ụfọdụ nwere ike melite arụmọrụ ọrụ gị nke ukwuu. Nke mbụ, ọ bụrụ na epoxy, gluu, agba, mkpuchi mkpuchi n'ala gị bụ ...
Diski na-egweri diamond maka egweri ihe, Terrazzo, Nkume elu
Nkọwa ọkachamara nke diski igwe diamond na-ezo aka na ihe eji eme ihe na-egweri diski a na-eji na igwe na-egweri, nke mejupụtara ahụ diski na akụkụ nke diamond. A na-agbakọ akụkụ diamond ma ọ bụ tinye ya n'ahụ diski ahụ, na elu ọrụ dị otú ahụ ...
Ugboro abụọ ahịrị diamond egweri iko
Mgbe ọ na-abịa na-egweri wheel maka ihe, i nwere ike na-eche nke turbo cup wheel, akụ iko wheel, otu ahiri cup wheel na na, taa, anyị ga-ewebata okpukpu abụọ ahiri cup wheel, ọ bụ otu n'ime ndị kasị elu oru oma diamond cup wheel maka egweri. ihe n'ala. N'ozuzu, ndị nkịtị nha anyị de...